သောသီခို: ဘုရင့်နောင်မင်း နှင့် အပြိုင်ကြဲမည့် နရဲ့ဆွမ်မင်း
ဘွဲ့ သွေးနီ - ၂၇၊ ၁၂၊ ၂၀၁၀
ဗမာပြည်နေရာအနှံ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာပါ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ဗမာဘုရင်များဖြစ်သော အလောင်မင်းတရားကြီး၊ ဘုရင့်နောင်မင်းကြီးတို့ ရုပ်ထုတွေကို စိုက်ထူနေတာကို အားလုံးသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် အုပ်စိုးသူ ဗမာအစိုးရတွေက ဗမာဘုရင်ရုပ်ထုတွေကို စိုက်ထူထားကြတာပါ။ အဲဒါကလည်း မဟာဝါဒကြီး ဒီတိုင်းပြည်မှာ ဆက်လက်ချယ်လှယ်နေအုံးမယ် ဆိုတာ ဒီဗမာဘုရင်ကြီးတွေရဲ့ ရုပ်ထုတွေက ဗမာအစိုးရကိုယ်စား နေ့ တိုင်းစကားပြောနေတာပါပဲ။ ဒီလို ဗမာဘုရင်ရုပ်ထုတွေကို လိုက်စိုက်ထူတဲ့နေရာမှာ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေက မျက်စိစူးပြီး အမြင်ကပ်နေတာ တိုင်းရင်းသားတွေအသိဆုံးပါ။
အခုတော့ ယိုးဒယားတွေကို ငယ်နိုင်တွေပါ လို့ အမြဲတမ်းပြောပြောနေတဲ့ မဟာဝါဒီတွေအတွက် ယခုရှမ်းပြည်နယ်မှာ ထိုင်းဘုရင် နရဲ့ဆွမ်ရုပ်ထုကို စိုက်ထူလိုက်တာဟာ သူတို့ အရိုက်ကို ဓါးနဲ့ ထိုး သလို ခံစားရမှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်။
စိုက်ထူလာခဲ့သမျှ ဗမာဘု၇င် ရုပ်ထုတွေဟာ ဗမာပြည်မြေပေါ်မှာပါ။ ယခု စိုက်ထူသွားတဲ့ ထိုင်းဘုရင် နရဲ့ဆွမ် ၏ရုပ်ထုဟာ ယိုးဒယားမြေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်၊ ဗမာပြည်မြေပေါ်မှာပါ(သနားတယ်လို့ယိုးဒယားတွေက ဗမာတွေကို ပြောနေပါတယ်)။ ကဲဒါဆို မင်းတို့ မဟာဝါဒီတွေ ဘာတတ်နိုင်သေးလည်း စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကြအုံး။
ယိုးဒယားနိုင်ငံဟာ ငါတို့ ငယ်နိုင်တွေပါကွာ လို့ ခုထိပြောပြောနေတဲ့ လူတွေ သန်းပေါင်းများစွာသော ဗမာပြည်သားတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကျွန်သဖွယ် အလုပ်လာလုပ်စားနေကြရပါတယ်။ ပြည့်တဆာရုံတွေမှာ ဆိုရင် ၉၀% လောက်ဟာ ဗမာပြည်က မိန်းကလေးတွေပါ ဆိုဒါ မမေ့ကြနဲ့ အုံး။ မျက်စိမှိတ်ပြီး ဇွတ်အော် မဟာဝါဒီရူး ရူးမနေနဲ့ အုံး။ ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။
ခုတော့ ဗမာပြည်မှာ နရဲ့ဆွမ် အသက်ဝင်နေပြီဆိုတာ ဒီရှမ်းပြည်နယ် သိုင်းလန်း တောင် ဌာနချုပ်တွင် ဆိုက်ထူလိုက်တဲ့ နရဲ့ဆွမ်ရုပ်ထုက သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါပြီ။ နောက်ထပ် နရဲ့ဆွမ်ရုပ်ထုတွေ ဗမာပြည် နေရာအနှံ့ ထပ်မလာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်သလဲ?
ဒီပြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ စစ်သူကြီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ “ဖါးဂေါ်” (ကရင်အမျိူးသား) ရုပ်ထုတွေ ဗမာပြည်အရှေ့ ပိုင်းမှာ ပေါ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်သလဲ?
ဒီလိုထိုင်းဘုရင်၊ စစ်သူကြီး ရုပ်ထုတွေ ဗမာပြည်မြေမှာ ပေါ်လာဖို့ ဆိုတာ ခုချိန်မှာ ဘာမှ မခက်ရင်းပဲ ကုန်ကြမ်းတွေ ရှိပြီးသားဆိုတာပါပဲ။ ပိုပြီး သေခြာတဲ့အချက်က အဲဒီကုန်ကြမ်းတွေက ထိုင်းအစိုးရ ကိုယ်တိုင် ဗမာကို ရာဇ၀င်ကြွေးပြန်ဆပ်ဖို့တမင်ရှာဖွေစုဆောင်း စည်းရုံး အသက်သွင်းထားတာ မဟုတ်ပဲ ဗမာစစ်အစိုးရ ကြီးစိုးတဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်ကိုယ်နိုက်က အဲဒီ ကုန်ကြမ်းတွေကို နေ့ တိုင်းလိုလို ထုတ်လုပ်နေလို့ ပါပဲ။
အဲဒါတွေက ဘာလည်းဆိုရင် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ ရွာမီးရှို့ ၊ လူသတ်၊ မုဒိမ်းကျင့်၊ ပေါ်တာဖမ်း ညှင်းပမ်းနိုပ်စက်၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို နည်းမျိူးစုံဖျက်ဆီး၊ မျိူးပျေက်အောင် စနစ်တကျစီမံဖျက်ဆီး၊ နေရာတိုင်းမှာ ဗမာမှုပြု၊ မဟာဝါဒနဲ့ စစ်အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ရေးအတွက် နည်းမျိူးစုံ လိမ်လည် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကို ရေးဆွဲပြီးအတည်ပြု၊ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကြအောင် နည်းမျိူးစုံသွေးခွဲ အုပ်ချူပ် စတာတွေက ယနေ့ နရဲ့ဆွမ်ရုပ်ထု ဗမာပြည် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ စိုက်ထူလိုက်ခြင်းအကြောင်းတရားရဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေပါပဲ။
ဗမာပြည်အုပ်စိုးသူတွေရဲ့ တစောက်ကန်း မဟာဝါဒရူးအတွေးအခေါ်တွေကြောင့် နိုင်ငံတော်ရဲ့အင်အားဟာ နိုင်ငံတော်အတွက်မဟုတ်တော့ပဲ တိုင်းတပါးက ကောင်းကောင်းအသုံးချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာက တိုင်းတပါးက တော်လို့ မဟုတ်ပါ။ ဗမာပြည်ကို အုပ်ချူပ်မင်းလုပ်သူတွေက သောက်သုံးမကျလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့ပြင် ဗမာ့တပ်မတော်ကိုယ်နိုက်က တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖျက်ဆီးထားတာတွေ သိပ်များလွန်းနေပြီမို့ လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ အပြောင်းအလဲ အချိူ့ အကွေ့ဆိုတာတွေဟာ မထင်မှတ်တဲ့နေရာ မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ တချက်ကောင်း တွေက ၀င်ဆောင့်ရင် အရာရာအားလုံးဟာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာလည်း အထောက်အထား သက်သေတွေ အများကြီးပါ။ အထူးသဖြင့် အာဏာရှင်ကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ တွေ့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါတို့ မှာ စစ်သည်အင်အား ၄-၅ သိန်းရှိနေတယ်လို့သိပ်ပြီး ဘ၀င်မြင့်ရူးမနေကြပါနဲ့ တော့ တပ်မတော်။ မင်းတို့ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အင်အား စိတ်စွမ်းရည်တွေဟာ တပ်ရင်းတရင်းစာပေါင်းမှ တော်လှန်ရေးတပ်သား တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ် တစ်ယောက်စာလောက်ပဲ ညီမျှဒါပါ။
နိုင်ငံသားများကို နိုင်ငံတော်ရဲ့ အင်အားဖြစ်စေချင်ရင် တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ယုတ်မာရိုင်းစိုင်း လူ့ အခွင့်အရေးချိူးဖေါက်မှုတွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ပါတော့လို့ ပြောကြားလို ပါတယ် ဗမာ့တပ်မတော်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မင်းတို့ ဖိနိုပ်သမျှ အရာတွေရဲ့ တန်ပြန်တွန်းလှန်မှုတွေကို တိုင်းတပါးအသုံးချပါတော့မည်။ ဒီလိုဆိုရင် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာဘာလည်းလို့ လာမမေးနဲ့ ။ တပ်မတော်ကိုယ်နိုက်က ပြည်တော်စုစိတ်ဓါတ်ကို ရှေးတန်းစစ်မြေပြင်မှာ နေ့ တိုင်းဖျက်ဆီးပစ်နေလို့ ဖြစ်ပါသည် ဆိုတာ သတိပေးပါရစေ။
၂၇၊ ၁၂၊ ၂၀၁၀
ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ဆက်စပ်၍ အောက်ပါသတင်းကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။ မောက္ခ သတင်းစာမျက်နှာ(http://www.maukkha.org)မှ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြသည်.
ထိုင်းသူရဲကောင်းဘုရင် ရုပ်တု ရှမ်းပြည်တွင် စိုက်ထူ
Thursday, 23 December 2010 16:54 Editor
ရှမ်းပြည် လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု စိတ်ခွန်အားအဖြစ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) က ထိုင်းသူရဲကောင်း ဘုရင် နရဲ့ဆွမ် ရုပ်တုကို မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ် သိုင်းလန်း တောင် ဌာနချုပ်တွင် ထူထောင်ခဲ့သည်။
၁၅၈၄ ခုနှစ်တွင် အယုဒ္ဓယပြည်ကို မြန်မာတို့လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သော ထိုင်း သူရဲကောင်းဘုရင်ရဲ့ အရှည်သုံးမီတာခန့်ရှိ ကြေးရုပ်တုကို ပြီးခဲ့သော ရက်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဟောင်ဆောင်ခရိုင် မြောက်ပိုင်း နှင့် နယ်စပ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သော ရှမ်းပြည်နယ် သိုင်းလန်းတောင် ဌာနချုပ်တွင် ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်မှုးကြီးရွက်ဆစ်က ပြောခဲ့သည်။
“ထိုင်းသူရဲကောင်း ဘုရင်ကြီး ရုပ်တုကို တည်ဆောက်နေတာ ငါးနှစ်ရှိပါပြီ။ အ ခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားကနေ ဒီနှစ်မှာ တော့ အောင်အောင်မြင်မြင် အဆုံးသတ် နိုင်ခဲ့ပြီ” ဟု ဗိုလ်မှုးကြီး ရွက်ဆစ်က ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် The Nation သတင်းစာ ကို ပြောပြ သည်။
သမိုင်းဝင်ဘုရင်ကြီးရဲ့ ရုပ်တုကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း၊ အစပိုင်းတွင် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံဖြစ်မည်စိုးသောကြောင့် ရွက်ဆစ်အား ထိုရုပ်တုကို ရှမ်းပြည်နယ်သို့ သယ်ဆောင်ပြီး ထူထောင်ဖို့ ပြောထားသော ကြောင့် တုန့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
ဗိုလ်မှုးကြီးရွက်ဆစ်က “ဒီနှစ်တော့ ရုပ်တုကို ကျနော်တို့ ရှမ်းပြည်မှာ သယ်ယူထူထောင်ဖို့ကိစ္စကို ဘယ်သူမှ မကန့်ကွက်ကြတော့ဘူး။ ဒါဟာ ဘုရင်ကြီး နရဲ့ဆွမ်က ကျနော်တို့ရဲ့ ရှမ်းနယ်မြေမှာ ကျနော်တို့နဲ့ အတူတူရှိမယ်ဆိုတဲ့ သဘော ပါပဲ။ တကယ်တော့ ထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ရှမ်းလူမျိုးတွေဟာ ယုံကြည်ချက် ခံစားချက် တူညီကြသူတွေပါ” ဟုပြောသည်။
ရှမ်းလူမျိုးများသည် သိုင်း (Tai) လူမျိုးစုဖြစ်သောကြောင့် သူတို့ ရှမ်းဘာသာဖြင့် သိုင်းဟုခေါ်ပါသည်။ ရှမ်းခေါင်း ဆောင်များက ထိုင်းသူရဲကောင်း ဘုရင်ကြီးအား ရှမ်းပြည်လွတ်မြောက်ရေး တိုက်ပွဲဝင်လူထုအတွက် စံနမူနာပြပုဂိုလ် အဖြစ် ထားချင်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
“သမိုင်းမှာဆိုရင် အဲဒီဘုရင်ကြီးက သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ရှမ်းလူမျိုးစ၀်ခမ်းကိုင်နွိုင် ကို ရှမ်းနိုင်ငံ (သိုင်းနိုင်ငံ) တည်ထောင်ရာမှာ အကူအညီပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတာ ပြောကြတဲ့ အထောက်အထား ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရင်ကြီးဟာ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ အဲ့ဒီစိတ်ကူးကို အကောင်အထည်မဖော်မီ ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဘုရင်ကြီးရဲ့ဝိညာဉ်က သိုင်းနယ်မြေတ၀ိုက်မှာ ကျနော်တို့ကို ဆက်လက် စောင့်ရှောက်နေဆဲလို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ရွက်ဆစ်က ပြောသည်။
ထိုင်းသူရဲကောင်း ဘုရင်သည် ၁၆၅၀ ခုနှစ်တွင် ချင်းမိုင်မြို့ ဖန်မြို့နယ် တစ်နေရာဖြစ်တဲ့ မူန်ဟန်တွင် သေဆုံးခဲ့သည်။ သေဆုံးချိန်တွင် အယုဒ္ဓယအင်ပိုင်ယာကို ယိုယွင်းစပြုနေသော မြန်မာပြည်ထဲသို့ ချဲ့ထွင်ရန် အကောင်အထည် ဖော်နေဆဲ ဖြစ်သည်ဟု သည်နေရှင်းသတင်းစာတွင် ရေးထားသည်။ ထိုဘုရင်ကြီးလက်ထက်တွင် အယုဒ္ဓယပြည်သည် ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းခြင်းခံရသောကြောင့် သာယာဝပြောပြီး အလွန်ထင်ရှားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
သတင်း The Nation
ဆောင်းပါးရှင်ကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံတယ်ဗျာ။ ခုချိန်မှာ တိုင်းပြည်တစ်ခုခုက ဗမာပြည်နဲ့ စစ်ဖြစ်ရင် ငါတို့ တွေက ၀င်လာတဲ့ တိုင်းပြည်ဖက်မှာ ၀င်တိုက်မယ်။ ဒီဗမာစစ်ခွေးတွေက ငါတို့ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ယုတ်မာထားဒါ ဘယ်တော့မှ မေ့လို့ မရဘူးကွ။
ကြွက်စုတ်တွေကို လက်တွေ့ကြွက်သတ်ဆေး နဲ့လည်းသတ်၊
ခုချိန်မှာ အခြားဘယ်တိုင်းပြည်တခုခုက စစ်တိုက်မလဲဆိုတာထက်
ထတိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့အတူ ကိုဆလိုင်းတို့လည်း နဲနဲပါးပါး သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလေး ဆင်းကြပါအုံး...